नेकपा कुनै गुटको फेडरेसन होइन : महासचिव पौडेल- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
नेकपा कुनै गुटको फेडरेसन होइन : महासचिव पौडेल
जेष्ठ २, २०७७ बिनु सुवेदी
काठमाडौँ — दुई वर्षअघि ठ्याक्कै आजकै दिन एकताका बेला नेकपा नेताहरूले दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । वाचाअनुसार भएको भए यतिखेर नेकपा नयाँ नेतृत्वसहित पार्टी काममा एकताबद्ध भइसक्नुपथ्र्याे तर अहिले पनि आन्तरिक भागबन्डामा कसको भूमिका के हुने भन्नेमै नेताहरूको ध्याउन्न छ ।
दुई वर्षसम्म पनि पार्टी एकता टुंगोमा पुग्‍न नसक्नुपछिका कारणका बारेमा बिनु सुवेदीले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसँग गरेको कुराकानी :
नेकपा एकता केका लागि गरिएको थियो र यो दुई वर्षमा के काम भयो ?
केका लागि गरिएको थियो भन्ने त छलफलको विषय भएन । राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजानका लागि एउटा लोकतान्त्रिक अग्रगामी समाजवादउन्मुख समाज निर्माणका लागि गरिएको एकता हो । संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि र न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्नका लागि एकता गरिएको हो । यसबीचमा एकता एकीकरणका अधिकांश काम सकिएका छन् । केही बाँकी छन् ।
एकीकरणको उद्देश्यअनुसार नेकपा चलेको छ त ?
जुन उद्देश्यका लागि एकता र एकीकरण गरिएको हो त्यो उद्देश्यतर्फ नै हामी छौं तर जुन हिसाबले एकतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने हो त्यसमा केही कमीकमजोरी भएको छ । उद्देश्यअनुसार एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं ।
यहाँले नै भनेअनुसार नेकपाको अहिलेको कमजोरी के हो ?
एकता प्रक्रियाबारे टुंगो लगाउन परस्परमा विश्वासको सम्बन्ध बनाउने, सामुन्नेमा आएका विषयहरूलाई एकताबद्ध भएर टुंगो लगाउने सन्दर्भमा केही कमजोरीहरू भएका छन् ।
सैद्धान्तिकभन्दा पनि गणितीय हिसाबले जोडिएको हुनाले पनि नेकपा नेकपाजस्तो हुन सकेन भन्ने टिप्पणी पनि छ नि ?
एकताको घोषणापत्रलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि यो एकताको मुख्य आधार भनेको सैद्धान्तिक नै हो । दुईटा फरक पृष्ठभूमिका पार्टी एक ठाउँमा आइपुगेका हौं । दुईवटा धारका राजनीतिक दल एउटा साझा सैद्धान्तिक निष्कर्षमा आइपुगेपछि एकता भएको हो । हामी माक्र्सवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दछौं । शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र संसदीय माध्यमबाट हामी विकास निर्माण, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समाजवादको आधार निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने विश्वासको आधारमा पार्टी एकता गरिएको हो । त्यसकारण एकता असैद्धान्तिक हो भन्ने होइन ।
पछिल्लो दुई वर्षलाई नियाल्दा त सिद्धान्त, नीति, विधिको बहस त्यति धेरै भएकोजस्तो देखिएन । बरु कसको जिम्मेवारी के हुने, कसले के भाग पाउने भन्ने विषयकै वरिपरि यहाँहरूको केन्द्रित भएको देखियो नि ?
हामी एकता प्रक्रिया टुंग्याइरहँदा के निष्कर्षमा पुग्यौं भने, एकता प्रक्रियापछि महाधिवेशनको तयारीमा लाग्छौं र त्यसपछि बल्ल हबहसको सुरुवात गर्छाैं भनेर निर्णय गरेको हो । हामीले सबैभन्दा पहिले एकता प्रक्रियालाई आधारभूत रूपमा टुंगो लगाउने र महाधिवेशनको तयारी सुरु गर्ने र त्यसपछि बल्ल उन्नतस्तरको बहसको प्रक्रिया खुला गर्ने तयारी हो ।
यसको मतलब नेकपामा सैद्धान्तिक राजनीतिक बहसको सुरुवात अझै भएको छैन ?
हामीले पार्टी एकता गर्दा जे जति सैद्धान्तिक नीतिगत निष्कर्ष निकाल्यौं, त्यसका आधारमा निर्देशित भएर अगाडि बढेका छौं । अरू बाँकी कतिपय विषयमा महाधिवेशनको मिति तय भएपछि हामी बहस खुल्ला गर्छाैं भन्ने हाम्रो निर्णय छ ।
एकताअघि विभिन्न खालको गोप्य सहमति भएको र समयक्रममा ती सहमतिहरू तोडिँदै गएको कारणले पनि यहाँहरूको पार्टी समस्या नै समस्यामा परेको हो भन्ने पनि हो नि, हैन र ?
विगतमा केही चिज गोप्य थियो भने पनि अब ती गोप्य रहेका छैनन् । आजको मितिमा भन्नुहुन्छ भने जे छ, पार्टीका निर्णयहरू छन्, त्यसको आधारमा पार्टी अघि बढ्छ । हाम्रो पार्टी मूलभूत रूपमा विधानको पालना गरेरै अघि बढेको छ । कतिपय अवस्थामा विधानको अक्षरश: पालना नभएको होला तर हामी अनुशासन बाहिर गएका छैनौं ।
तर छलफलबाट विषयको हल गर्ने र सामूहिक निर्णय गर्ने कम्युनिस्ट परम्पराबाट नेकपा बाहिर गयो भन्ने आक्षेप छ नि ?
नेकपाको आन्तरिक जीवनमा केही समस्या देखिएका थिए । केही न केही समस्या अहिले पनि होलान् । हामी त कमीहरूलाई पनि आपसी एकतालाई प्रभावकारी बनाएरै अघि बढ्छौं । एउटा घरभित्र पनि समस्या आउँछ भने, ठूलो पार्टीमा कामको दौरानमा साना–मसिना समस्या देखिनु स्वाभाविक हो । हामी ती समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्छौं ।
तपाईंहरूको पार्टीमा विभिन्न खालका समूहको छलफल हुन्छन्, कहिले को कतातिर ढल्किएको हुन्छ, ती समूह मिलाउन यहाँको विशेष दौडधुप नै देखिन्छ । खासमा तपाईंलाई त दु:ख छ नि है ?
नेकपा कुनै गुटको फेडरेसन होइन । यो सुन्तलाजस्तो हैन, स्याउजस्तो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । स्वाभाविक रूपमा खँदिलो एकता हुन एउटा निश्चित समय त लागिहाल्छ । संस्थागत निर्णय गरेर अघि बढ्छौं भन्ने कुरालाई हामी स्थापित गर्छाैं ।
तर कहिलेकाहीँ समस्या एकदम धेरै देखिन्छ नि, केही कारण त होला ?
भित्र जति समस्या छ, बाहिर अतिरन्जना भएर पनि आउँछन् । तर मलाई के लाग्छ भने हामीसित जति समस्या छन्, ती काबुबाहिर छैनन् । ती समस्या हल गर्न सकिन्छ ।
टाउका टाउकाले कानेखुसी गरेर पार्टीमा समस्या बल्झिएको हो : शर्मा
नेकपा एकता : रस्साकसीमै अल्झियो दुई वर्ष
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ ०९:३७
एकताका बेला नेकपा नेताहरूले दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । वाचाअनुसार भएको भए यतिखेर नेकपा नयाँ नेतृत्वसहित पार्टी काममा एकताबद्ध भइसक्नुपर्थ्‍यो तर अहिले पनि आन्तरिक भागबन्डामा कसको भूमिका के हुने भन्नेमै नेताहरूको ध्याउन्न छ ।
काठमाडौँ — दुई वर्षअघि २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुँदा नेकपा अध्यक्षद्वयले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पार्कमा सँगै रोपेको जापानी बिरुवा ‘जिंक्गो वाइलोवा’ विस्तारै हुर्किंदै छ । हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक आक्रमण हुँदासमेत नमरेको उक्त रुखजस्तै पार्टीलाई पनि बलियो बनाउँछौं भन्ने सांकेतिक अर्थ दिन अध्यक्षद्वयले त्यसको बिरुवा रोजका थिए ।
त्यसयताका दुई वर्ष बालुवाटारभित्रको जिंक्गो वाइलोवाले जति घामपानी ब्यहोरेर हुर्किन संघर्ष गरिरहेको छ, नेकपाभित्रको एकीकरणको संघर्ष पनि लगभग त्यस्तै नै छ । किनकि वनस्पतिविज्ञहरू भन्छन्, उक्त बिरुवालाई हुर्काउन अत्यन्तै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्दा नेताहरूको बाचा थियो– दुई वर्षभित्रमा महाधिवेशन गरिसक्छौं । घोषणा र बाचाअनुसार भएको भए यतिखेर नेकपा नयाँ नेतृत्वसहित पार्टी काममा एकताबद्ध भइसक्नुपथ्र्यो तर अहिले पनि आन्तरिक भागबन्डामा कसको भूमिका के हुने भन्नेमै नेताहरूको ध्याउन्न छ । उदाहरणका रूपमा गत वैशाख २४ र २० गते बसेको सचिवालय बैठकको परिदृश्य मात्रै हेर्दा पनि त्यसभित्रको किचलोबारे धेरै प्रस्ट हुन सकिन्छ ।
२० गते कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको पहिलो वरीयताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा सरकार र पार्टी चलाएको भन्दै आक्रोश पोखे । दाहालले बैठकमा बसाइको व्यवस्थापनदेखि ओलीपक्षीय नेताहरूका बीचमा भइरहेका गुट–उपगुटसम्मको विषयलाई छलफलको एजेन्डा बनाए । गत मंसिर ४ मा सरकार पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले चलाउने र पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी दाहालले लिने गरी भएको सहमति महिना दिन नबित्दै निष्क्रिय भयो ।
दाहालसहितको एउटा समूह प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली मन नपरेको भन्दै गुट/उपगुटको भेलामा सक्रिय रह्यो भने ओलीपक्षीय नेताहरू पनि आफ्ना गुट बलियो बनाउनै व्यस्त रहे । केन्द्रका नेताहरूले आआफू बलियो बन्ने खेलमा लागिरहँदा तल्लो तहका कार्यकर्ताले भने पार्टी सदस्यतासमेत नवीकरण गर्न सकिरहेका थिएनन् । महासचिव विष्णु पौडेल पार्टीभित्र समस्या भए पनि त्यो आफूहरूको काबुबाहिर नभएको दाबी गर्छन् । ‘एकीकरणको उद्देश्यअनुरूप प्रगति नभएको कतैकतै देखिएको छ,’ एकीकरण प्रक्रियामा उल्लेख्य भूमिका खेलेका महासचिव पौडेलले भने, ‘तर हामीले हाम्रो पार्टीलाई अझै बलियो बनाउने क्षमता राख्छौं, पार्टीको गुटको फेडेरेसन बन्न दिँदैनौं ।’
नेकपा स्वयंको दाबीअनुसार मुलुकभर ८ लाख कार्यकर्ता छन् । तर नेकपा सचिवालयका ९ सदस्य र सबैभन्दा धेरै अध्यक्षद्वयकै तजबिजमा चलिरहेको देखिन्छ । विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं नेकपा अहिले एउटा सानो पार्टीका रूपमा समेत नरहेको बताउँछन् । ‘एकीकरण भएको भन्दा पनि दुई पार्टी जोडिएको थियो, त्यतिखेर यी दुवै पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक जीवन लगभग समाप्त भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘सिद्धान्तै नभई जोडिएको चिज भएकाले झन् शक्तिशाली जस्तो त देखियो तर वास्तवमा नेकपामा दुवै पार्टीबाट आएको संकट जोडिएर महासंकट देखिएको छ ।’
हुन पनि अध्यक्षद्वयको छलफलको प्राथमिकतासमेत उनीहरूकै वरिपरि केन्द्रित रहन्छ । ‘सम्भवत: त्यही भएर केही अघि सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, मेरो छलफल र बैठकका ७० प्रतिशत समय सचिवालयकै नेताहरूको गुनासा सुनेर र उनीहरूको चित्त बुझाएर सकिन्छ ।’
कान्तिपुरले संकलन गरेको तथ्यांकअुनसार पनि सरकार गठन भएयताका साढे दुई वर्षमा दुई अध्यक्षले मात्रै एक्लाएक्लै झन्डै ३ सय पटक भेटका छन् । कम्तीमा १ घण्टादेखि बढीमा ३ घण्टासम्म चल्ने त्यस्ता भेटहरू प्रायजसो दुई अध्यक्षकै शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित रहेका छन् । तर पनि कुरा मिल्न नसक्नु र घुमिफिरी एउटै बिन्दुमा पुगेर कुरा बल्झिनुका पछाडि स्वार्थहरू नमिलेर नै हो भन्ने तर्क नेताहरूको पनि छ ।
जस्तो कि गत २४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्ने कार्यसूची थियो । तर स्थायी कमिटीलाई नै कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूका बीचमा कुरा मिलेन । प्रधानमन्त्री ओली र अरू नेताहरूका बीचमा भनाभन भएपछि ओली आफू थाकेको भन्दै बैठक छोडेर हिँडे । ओलीले चार दिनअघिको बैठकमा आफैंले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न तत्परता नदेखाउनुका पछाडि सचिवालयमा फेरिएको समीकरण मुख्य कारण थियो । चार दिनका बीचमा उनी सचिवालयभित्र बलियो भइसकेका थिए ।
उता अब पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने भनेर बैठकबाट छुट्टिएका दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय नेताहरूको छुट्टै बैठक र भेला चलिरहेको थियो, जुन ओलीलाई चित्त बुझेको थिएन । त्यसैले नेकपा सचिवालयको पछिल्लो छलफल कसले कसका विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आरोप/प्रत्यारोप गरेरै रोकियो ।
यसरी शीर्ष नेताहरूले एकले अर्कालाई आरोप/प्रत्यारोप गरेको गत २४ गतेको सचिवालय बैठक त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । यसअघिका अन्य बैठकमा पनि आरोप/प्रत्यारोपको शृंखला नै चलेको थियो । स–साना विषयमा स्वार्थ नमिल्दा नेताहरूले पार्टीलाई ससर्ती अघि बढ्न दिएका छैनन् । अझ पार्टी एकीकरणको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै यही सरकार रहिरहने वा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्नेबारेको बहसको रापतापले नेकपावृत्त तात्यो, दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आयो ।
ठ्याक्कै पार्टी एकीकरणको एक वर्ष पुगेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साढे २ वर्षको अवधिमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिको खुलासा गरे । त्यसअघि पनि सरकार सञ्चालन र पार्टी एकताका विषयमा अध्यक्षद्वयबीच भागबन्डा मिलिरहेको थिएन । कतिसम्म भने कुन विभागको प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयकै छलफल अध्यक्षहरूले महिनौंसम्म लम्ब्याए । अहिलेसम्म पनि ती विभागले पूर्णता नपाउँदा विभागीय कामहरू चलायमान हुन सकेका छैनन् । पार्टी एकीकरणमा सक्रिय भूमिका खेलेका अर्का नेता जनार्दन शर्मा नेतृत्वले आफूलाई विधानभन्दा माथि सोचेकाले पार्टीमा यस्तो खालको समस्या आएको बताउँछन् । ‘दुइटा फरक धारमा रहेका पार्टीलाई अघि बढाएका छौं, हामीमा नयाँ चुनौती थपिएको छ,’ शर्माले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती पार्टीको मूल नेतृत्वलाई विधिसम्मत बनाएर अघि बढाउनुपर्ने नै हो ।’
नेकपाको विधानमा प्रत्येक ६ महिनामा पार्टी केन्द्रीय कमिटी र तीन महिना स्थायी कमिटी बैठक राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर एकीकरण भएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक नेताहरूसमेत छलफलमा सहभागी हुन पाउने गरी जम्माजम्मी एकपटक मात्रै बस्यो भने स्थायी कमिटी चार पटकमात्रै । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले चिठ्ठी नै लेखेर माग गरेको बैठक पनि दुई अध्यक्षकै कुरा नमिल्दा बस्न सकेन । नेकपाका शीर्ष नेताहरू पार्टी एकताताकाको सहमतिमा अड्किएको भए अहिले पार्टीको एकता महाधिवेशन भइसकेको हुन्थ्यो । तर आन्तरिक विवाद मिलाउनमै पार्टी एकताको घोषणा गर्दा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्छाैं भनेर घोषणा गरेको नेकपाले अहिलेसम्म पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छैन । बरु यो दुई वर्षमा नेकपाभित्र एकले अर्कालाई उचाल्ने र पछार्ने काम धेरैपटक भयो ।
पछिल्लो समय त सजिलै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश आएपछि नेकपा स्वयं पनि फुटको संघारमा पुगिसकेको छ भन्ने अड्कलबाजी पार्टी वृत्तभित्रै भयो । अध्यक्षद्वयकै छलफलमा समेत मिल्न सकिँदैन भने अब छुट्टिएकै बेस भन्ने आशयका कुराकानी धेरैपटक भए । विश्लेषक प्रसाईं नेकपाभित्र सैद्धान्तिक एकता नै नभएकाले यस्तो खालको छलफल हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । नेकपाले बिताएको दुई वर्षलाई हेर्दा नेकपाको भविष्य पनि अनिश्चित रहेको तर्क उनको छ ।
‘अहिलेकै गतिमा हेर्दा यो वाम पार्टीबाट गैरवाम पार्टीमा परिणत भएको छ र यो अझै प्रमाणित हुँदै जाला,’ उनले भने, ‘जीवित भइरहने हो भने सबैभन्दा पहिला यो पार्टीका रूपमा बाँच्नुपर्छ, त्यसपछि लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा बाँच्नुपर्छ अनि बल्ल वाम पार्टीका रूपमा बाँच्ने हो । त्यसका लागि यसले आफूभित्रको लोकतान्त्रिक स्पेसलाई पुनप्र्राप्ति गर्न जरुरी छ, नेकपाको नेत्तृवले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ ०९:२५
‘कोरोनासँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ’
‘संविधान संशाेधनको ढाेका खुलै छ’
‘जनतालाई गणतन्त्रको अनुभूति भएको छैन’
‘चीनले लिपुलेकलाई यथास्थितिमा राखेको छ’
‘लकडाउन लम्ब्याउँदैमा आयातित केस रोक्न सक्दैनौं’
हामीसँग प्रमाणको अभाव छैन : माधवकुमार नेपाल [अन्तर्वार्ता]